कान्छ दिदी र चन्द्र केसी विरुद्ध गुल्मी कांग्रेस खनियो ! – ebaglung.com
कान्छ दिदी र चन्द्र केसी विरुद्ध गुल्मी कांग्रेस खनियो !
२०७४ आश्विन २१, शनिबार १८:५६	Top News, अन्य समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ असोज २१ । स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई असहयोग गरेको भन्दै त्यस पार्टीका पुराना नेता र नेतृ सुवर्ण ज्वारचन (कान्छ दिदी)र चन्द्र केसी विरुद्ध सो पार्टीको जिल्ला संगठन सर्वसम्मत ढंगले खनिएको खुलासा कांग्रेस नेताहरुले नै गरेका छन् । तिन दिन अघि नेपाली कांग्रेस गुल्मी जिल्ला पार्टीको बैठक बसेर कान्छि दिदीले स्थानिय तहको निर्वाचनमा जिल्ला पार्टी संगठनको निर्देशनलाई अटेरी गरेको र चन्द्र केसीले पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठललाई रेसुङ्गा नगरपालिकाको मेयरमा हराउन लागि परेको ठहर गर्दै केन्द्रमा उनिहरुको बारेमा ध्यानकृष्ट गराईएको सभापति श्रेष्ठले आज खुलासा गरेका हुन् ।
‘चन्द्र केसी जीले पदयि दायित्व निर्वाह नगरी मलाई मेयरमा हराउन अन्तर्घातलाई मलजल गरेको र कान्छि दिदीले पार्टी निर्देशन अटेरी गरेकाले उहाँहरुलाई जिल्ला पार्टीले सर्वसम्मत रुपमा केन्द्रको ध्यानकृष्ट गराएको छ ’–सभापति श्रेष्ठले भने ।
हाम्रो थप जिज्ञाषामा श्रेष्ठले थपे –‘ स्थानिय तहको निर्वाचनताका चोरकाटेमा कान्छि दिदीले भाषण गर्दा माओवादी संग तालमेल गरे क्षेत्रिय सभापति पारिश्वर ढकाल , जिल्ला पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ र नेता चन्द्र भण्डारीको हातखुट्टा भाँचेर बडिघाट खोलामा फालि दिन्छु जस्ताा अभिव्यक्ति समेत दिनु भएको सत्य हो । चन्द्र केसी जीले मलाई हराउन अन्तर्घात गरेको पाईयो यसर्थ उहाँहरुको असहयोग विरुद्ध यस्तो निर्णएँ गरिएको हो । ’
केसी र कान्छि दिदी विरुद्ध बहमुत जुटाउन सक्नुले श्रेष्ठ नेतृत्वको जिल्ला पार्टी बलियो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सभापति श्रेष्ठ पौड्याल गुटको मानिए पनि केहि वर्षयता सवैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने मानसिकतामा देखिएको उनका एक कार्यकर्ताको भनाई छ । केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारी , सभापति श्रेष्ठ र सचिव खिलध्वज पन्थी लगायतको यहाँको ‘हाईकमाण्ड’ वलियो खम्बाको रुपमा उभिएको यस निर्णयले स्पष्ट पारेको कार्यकर्ताहरुको प्रतिकृया रहेको छ ।
चन्द्र केसी खुमबहादुर खड्का गुट र कान्छि दिदी शेरबहादुर देउवा गुटमा रहेको कार्यकर्ताहरुको ठम्याँईछ । यस सम्वन्धमा नेता चन्द्र केसी संग सम्पर्क राख्दा उनले जिल्ला पार्टीमा उठेका केहि गुनासाहरुलाई लिएर केहि पक्षधरले तिललाई पाहड मात्रै बनाउन खोजेको प्रतिकृया दिए । ‘हरि केसी लगायतले चुनावमा अपेक्षा गरे अनुरुपको सहयोग तपाईले गर्नु भएन जस्ता कुराहरु राखेका थिए । त्यसलाई कार्बाही गरेको भन्दै केहि मिडियाहरुमा आएको समाचारलाई म यसै मिडियाद्धारा खण्डन गर्दछु’ केसीले भने– पुर्वग्रही र कपोकल्पीत हल्ला फिजाईएको मात्र हो ।’
उनले २ नम्वर क्षेत्रबाट आफुलाई सभासद उमेदवारका लागि पार्टीले एक नम्वरमा सिफारिस गरी रहेको र पार्टीमा गुट उपगुट र कुनै मतभेद समेत नरहेको दावि गरे । कान्छि दिदी संग भने सम्पर्क हुन सकेन् । सभापति श्रेष्ठले भने वामपन्थी गठवन्धनको चर्चा संगै उमेदवार छनौटमा समेत अन्यौलता छाएकोले केन्द्रको निर्णय कुर्दै बसेको बताए । चन्द्र केसी पुर्व जिल्ला पार्टी सभापति, जिल्ला विकास समितिको सभापति भई सकेका र अहिले महासमिति सदस्य हुन् । कान्छि दिदी पनि उनि भन्दा पुरानी नेतृ हुन् । पुर्व वाणिज्य राज्य मन्त्री र चन्द्र केसी कै पालामा उनले जिविस उपसभापति जितेकी थिईन् ।
उनि संघिय तहको निर्वाचनमा एमाले सचिव गोकर्णराज विष्ट संग चुनावी भिडन्तमा होमिदै छन भन्ने चर्चा छ । उता क्षेत्र नम्वर १ मा एमालेका अर्का सचिव प्रदिप ज्ञवाली संग चन्द्र भण्डारी भिड्ने चर्चा छ । प्रदेशमा भने एमालेका नेता एवं पुर्व सांसद कमलराज श्रेष्ठको नाम बढि चर्चामा छ । उनि संग कांग्रेसबाट श्रीप्रसाद भलामी भिड्ने हुन कि अरु कुनै नेता हुन रु त्यो भने टुङ्गो लागेको छैन् । चर्चा र सम्भावना बोकेका नेताहरु गत स्थानिय तहको चुनावी खर्चलाई स्मरण गर्दै पैसा खोज्ने चक्करमा लागेको स्थानियहरु बताउँ छन् ।
बुर्तिवाङमा चियापान : तीन वामको एकता समाजवाद प्राप्तिको दिशामा एक ऐतिहासिक फड्को
राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक सम्मृद्धिको बाधक हो – पूर्व गभर्नर क्षेत्री